चोरी कटान भएका बहुमूल्य काठ बारीमै सड्दै - Aarthiknews
विहीबार, ०६ माघ २०७८ Thursday, 20 January, 2022
चोरी कटान भएका बहुमूल्य काठ बारीमै सड्दै
बुधबार, ०७ पुस २०७८
महोत्तरी । न्यायिक निकायले समयमै मुद्दाको फैसला नगर्दा बहुमूल्य काठ सड्न थालेको छ । जिल्लाका विभिन्न वनमा चोरी कटानका क्रममा वनका कर्मचारीले बरामद गरेको काठ दैनिक सड्न थालेको छ ।
मुद्दा समयमै फैसला नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा लैजान नसकिएको जिल्ला वन कार्यालयका कार्यालयका रेञ्जर सन्तोषकुमार यादवले जानकारी दिए । चोरी कटान भएका काठ बरामद गरिएपछि त्यसको प्रारम्भिक न्यायिक सुनवाइ जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था छ । बरामद गरिएका दुई लाख बिगोभित्रका काठ चोरी मुद्दाको सुनुवाइ डिभिजन वन कार्यालयकै इजलास तथा त्यसभन्दा बढीको सुनवाइ जिल्ला अदालतले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बरामद गरिएको चार हजार क्यूफिट काठ डिभिजन वन कार्यालयमातहतको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा, माईस्थानको कार्यालय परिसरमा थन्किएको छ । चार वर्षयता बरामद गरिएको काठ सड्ने र धोद्रिने क्रममा छ । डिभिजन वन कार्यालयमा २०४८ सालयता १९८ वन मुद्दा (काठ चोरी निकासी) परेका डिभिजन प्रमुख विनोदकुमार सिंहले बताए । यी मुद्दा रु दुई लाख बिगोभित्रका हुन् । यसबाहेक २०० भन्दा बढी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कटान गरिएको काठ पनि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा राखिएको छ । कटान भएको काठको लिलामीका लागि वन मन्त्रालयसम्मको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस क्रममा कुकाठ भने बिक्री गरिएको सिंहले बताए । हाल सड्न थालेको काठ करोडौँ रुपैयाँको रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बन्दीपुर केबलकारमा दुई अर्ब ६० करोड लगानी
यातायात व्यवस्था कार्यालय इलामद्वारा तीन करोड राजस्व सङ्कलन
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गर्यो एक खर्ब पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
विराटनगर भन्सारबाट २१ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
भोलिदेखि सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू हुने
टेलिकममा दु्रत गतिको डाटा र भ्वाइस सेवा
थपिए १२ हजार ३३८ जना कोरोना संक्रमित, उपत्यकाका मात्रै ६९८१ जना
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको एनिमेटेड प्रोडक्ट इन्फरमेशन भिडियो सार्वजनिक
लोकसेवा आयोगले गर्यो माघमसान्तसम्मका पुर्व निर्धारित सबै लिखित परीक्षा स्थगित
२ कोठाको फ्ल्याटमा बस्ने रतन टाटाका भाईको हुन् ?
कपडाको मास्कभन्दा एन ९५ मास्क लगाउनु किन राम्रो ?
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीप्रसारण लाइनमा स्थानीयवासीको अवरोध
बैठक चलेको तीन मिटेनमै ९०० कर्मचारीको जागिर खाने सिइओ फेरि फर्के
बोर्डले दियो दुई बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति
सहारा मरुभूमिमा हिमपात, के यो अचम्म हो ?
अमेरिकामा ५ जी लागू भएपछि ठूलो अवरोध, सबै विमानका उडान स्थगित
नेप्सेमा ४ कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुन कुन कम्पनीको भयो ?
बुद्ध एयरको विमान ल्याण्ड हुन नसक्दा एक यात्रु बेहोस
आजदेखि जिप्रका भक्तपुरको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द
आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान, हल्का हिमपातको संभावना
पीसीआर टेष्टको मूल्य कहाँ कति पर्छ ?
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा मंगलवार हुदै